Kuchenesa Nzvimbo Fekitori - China Kuchenesa Nzvimbo Vagadziri, Vatengesi
Fume Hood Series Kupedza Magasi Akaipa
Fume hood chinhu chakajairika chemurabhoritari chinoshandiswa mumarabhoritari chinoda kupedza magasi anokuvadza, uye chinoda kucheneswa nekuburitswa panguva yekuyedza.
Tafura Rudzi Ultra-yakachena Workbench Series
Bhenji rakachena imhando yemidziyo yekuchenesa isina kukwana inoshandiswa munzvimbo yakachena.Kushandiswa kuri nyore, chimiro chakareruka uye kugona kwakanyanya.Inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi, zviridzwa, pharmacy, optics, chirimwa mutishu tsika, sainzi masangano ekutsvagisa uye marabhoritari, nezvimwe.
Vertical Flow Ultra-yakachena Workbench Series
Horizontal uye Vertical Dual-chinangwa Ultra-yakachena Workbench Series
Iyo yakagadzirwa nevanhu inonyatso funga izvo chaizvo zvinodiwa nevashandisi.Zvinoenderana neiyo counterweight yakaenzana chimiro, girazi rinotsvedza gonhi rehwindo rekushandisa rinogona kuiswa zvisina tsarukano, zvichiita kuti kuyedza kuve nyore uye nyore.
Biological Safety Cabinet Series Half Exhaust
Biological safety cabinet (BSC) ibhokisi-mhando yekuchenesa mhepo isina kudzvanya chengetedzo mudziyo unogona kudzivirira zvimwe zvine ngozi kana zvisingazivikanwe biological particles kubva pakurasa aerosols panguva yekuyedza operation.inoshandiswa zvakanyanya mukutsvaga kwesainzi, kudzidzisa, kuongororwa kwekiriniki nezvimwe.
Biological Safety Cabinet Series Yakazara Exhaust
Inoshandiswa zvakanyanya mukutsvagisa kwesainzi, kudzidzisa, kuongororwa kwekiriniki uye kugadzirwa muminda yemicrobiology, biomedicine, genetic engineering, biological products, etc. Ndiyo inonyanya kukosha yekuchengetedza midziyo yekudzivirira muchikamu chekutanga chekudzivirira murabhoritari biosafety.